भ्रमण बर्ष सुरु भए पनि सीमा–नाकामा नेपाली कर्मचारीको व्यवहारबाट भारतीय पर्यटक आजित (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
भ्रमण बर्ष सुरु भए पनि सीमा–नाकामा नेपाली कर्मचारीको व्यवहारबाट भारतीय पर्यटक आजित (भिडियो)
१. भ्रमण बर्ष सुरु भए पनि सीमा–नाकामा नेपाली कर्मचारीको व्यवहारबाट भारतीय पर्यटक आजित
भ्रमण बर्षको अवसरमा नेपाल विदेशी पर्यटकलाई देशभित्र लोभ्याउन र उनीहरुको उपस्थिति बढाउन व्यस्त छ । भ्रमण बर्ष सफल पार्न नेपालले यतिखेर हरेक पक्षमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
धेरै पूर्वाधारहरुमाथि प्रश्न उठिरहे पनि नेपाल भ्रमण बर्षमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले अब कमी कमजोरीहरु अघि सारेर नभइ भएका कमी कमजोरीलाई पनि व्यवहारले छोपेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।
नेपाल भ्रमण बर्ष सफल पार्न विदेशी पर्यटकहरुको पहिलो उपस्थिति हुने विमानस्थलदेखि सीमानाकासम्म र होटल देखि पर्यटकीय स्थलहरुसम्म ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिएको छ ।
विमानस्थल र सीमानाकामा कर्मचारी एवं सुरक्षार्कीहरुले गर्ने व्यवहारले पर्यटकमा प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले सबैले सचेत बन्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालमा आउने धेरै पर्यटकहरु भारतकै हुने गर्छन ।
तर स्थलमार्गमार्फत सीमानाकाबाट नेपाल भित्रने भारतीय पर्यटकहरु सीमानाकामा खटिएका कर्मचारीहरुले अनावश्यक दुःख दिने, हेप्ने र बिभिन्न डरत्रास देखाउने गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यो शैलीले भ्रमण बर्ष ट्वान्टी ट्वान्टीलाई कुनै पनि हालतमा सफल पार्दैन । त्यसैले सीमानाकाका कर्मचारीले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
२.सुदूरपश्चिमको ९ जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा विमानस्थल बनेपनि डडेल्धुरामा भने बल्ल बनाउने तयारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला मध्ये ८ जिल्लामा विमानस्थलको व्यवस्था छ । तर डडेल्धुरा भने यो मामिलामा अभागी रहदै आएको छ । तर अब भने डडेल्धुरा पनि विमानस्थल निर्माण गर्न अघि सरेको छ ।
काठमाडौंबाट सोझै उडानको व्यवस्था गर्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य पनि सम्पन्न गरिएको छ । डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाको पुइलेकदेखि वयलडाँडासम्मको मैदानलाई यस्का लागि उपयुक्त मानिएको छ ।
प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि उपयुक्त देखिएको यो भूभागमा निर्माण थालिए विमानस्थल चार बर्षभित्र निर्माण गर्न सकिने प्राविधिकहरुको निष्कर्ष छ । उडान र अवतरण लगायत अन्य सुविधाका लागि पनि यो भूभाग उचित रहेको निष्कर्ष पनि प्राविधिकहरुको छ ।
३. निरन्तरको हिमपातले विद्युत सेवा ठप्प भएपछि वैतडीको पाटनवासी खानेपानीको अभावको मारमा
निरन्तरको हिमपातले विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा वैतडीको जनजीवन हिउँ झै कठ्यांगिएको छ । लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानी विद्युत अवरुद्ध हुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण वैतडी सदरमुकाम पाटनवासीहरु खानेपानीको अभावमा तड्पिन थालेका छन् ।
हिउँ पगालेर पानीको तिर्सना मेट्दै आएका पाटनवासीहरुले हरेक हिउँदमा यो समस्या भोग्दै आएका छन् । स्थायीरुपमा समस्या समाधानका लागि पाटनवासीले माग राख्दै आएपनि उनीहरुको समस्या कहिंकतैबाट सुनुवाई नहुँदा कष्टकर जीवन जीउन विवश छन् ।
एकातिर खानेपानीको अभाव त अर्कोतर्फ टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध हुँदा पाटनवासीको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ ।